“Baaq la xidhiidha doorashada iyo duruufaha ku xeeran” Ururka isku xidha jaaliyadaha Somaliland ee Yurub (SSE) | Somaliland.Org
March 29, 2009	Taariikh:27/03/2009
Baaq la xidhiidha doorashada iyo duruufaha ku xeeran
Ururka isku xidha jaaliyadaha Somaliland ee Yurub (SSE) waxa uu muujinayaa dareenka xooggan ee uu ka qabo xaaladda uu hadda waddanku ku suganyahay. Kulanweynihii ururka SSE uu ku yeeshay waddanka Sweden (Uppsala 20-22kii Maaris 2009), kaasoo ay ka soo qayb galeen ergooyin ka kala socdey 10 waddan ayaa waxa madasha kulanka laga muujiyey in Somaliland ay soo foodsaartey marxalad adag oo ay tahay in aan la dhayalsan oo aan laga aamusi karin. Dareenkani waa mid aanu la qabno shicibweynaha reer Somaliland mid ku sugan dalkii iyo mid ku nool qurbaha. Ururka SSE waxa uu marka hore baaqan si cad ugu qeexayaa taageerada uu u hayo shicibweynaha reer Somaliland ee diyaarka u ah inay codkooda dhiibtaan isla markaana ka soo qayb qaatay hawshii diiwaangelinta.
Duruufaha iyo caqabadaha muuqda
Wakhtigan la joogo waxa muuqda in lagu kala tagsanyahay khilaafka ka dhashay doorashada oo aan ku dhaceyn wakhtigii lagu heshiiyay sannad horteed, taasoo ah 29ka Maaris 2009 oo ay dhowr cisho inaga xigaan. Waxa kale oo iyaduna meesha taalla in aan saddexda xisbi aanay isku raacin wakhtiga doorasho la qabanayo. Waa xaalad cakiran oo aad u dhaawacaysa kalsoonidii iyo wada shaqayntii dhinacyada uu arrinkani khuseeyo.
Waxa kale oo iyana xaqiiqa ah in qabyo badani ay jirto oo farsamo ahaan aanay la’aantood qabsoomaynin in la helo doorasho xalaal ah ilaa la qabyotiro cilladaha farsamo ee jira, kuwaasoo ay ka mid yihiin in guddiga doorashooyinku ay si buuxda u dhammaystiraan agabkii looga baahnaa hawlaha doorashada oo dhan iyo weliba dadkii hawlahaa ku hawl geli lahaa, iyadoo weliba la adeegsanayo qalab aan hore loogu adeegsan doorashooyinkeenii hore.
Qabyadan iyo kala daadsanaanta jirtaa waxa kale oo ay shaki gelinaysaa in xataa maalinta kale ee guddiga doorashooyinku ay ku dhawaaqeen qabashada doorashada, oo ah 31 May in iyada lafteeda aanay u muuqan inay ku qabsoomayso doorasho si fiican loogu diyaar garoobay xataa hadday ay isku raacaan dhinacyada ay khuseyso, wakhtiga oo is riixay darteed. Ururka SSE isagoo qaddarinaya:
- Iyadoo caalamku indhaha ku hayo doorashada Somaliland iyo sida la inoogu hanweynyahay, marka la barbardhigo waddamada inagu xeeran.
- Iyada oo aan qaddarinayno dadaalka iyo hawsha aynu gelinay arrimaha diiwaangelinta si ay doorasho xalaal ahi u dhacdo mustaqbalka haddii Ilaahay yidha. Diiwaangelinta waxa laga hirgeliyay lixda gobbol iyadoo ay jiraan duruufo qalafsani.
- Iyadoo geedi socodka Somaliland iyo xasilloonida jirta loo soo galey halgan iyo wakhti adag oo dadweynaha reer Somaliland ay u hureen naftooda iyo maalkooda.
- Iyada oo yoolka ay Somaliland wakhtigan u halgamaysaa uu yahay in la helo doorasho xalaal ah oo ka saafi ah musuq iyo caddaalad darro.
Ururka SSE isagoo ka duulaya dhammaan arrimaha kor lagu soo xusay ayaa uu ku talinayaa arrimaha hoos ku xusan:
-In sida ugu dhakhsaha badan ay isugu yimaadaan saddexda xisbi qaran iyo guddiga doorashadu isla markaana la waajaho xaqiiqda jirta ee aynu maanta markhaatiga ka wada nahay.
-In la isla fahmo khaladaadka dhacay iyo mas’uulliyada keentay in doorashadii ay ku dhici weydo wakhtigii loogu talo galey.
-In dhinacna kelidii aanu go’aan qaadan, haddii ay tahay xukuumad, xisbi ama hay’ad kaleba iyagoo xeerka ama dastuurka dalka u turjumanaya sida ay la tahay.
-In la isla waafaqo sidii ay u dhici laheyd doorasho xalaal ah oo wakhtiyaysan isla markaana ay weheliyaan shuruudo adag oo dabar u noqda adkeynta wixii la isla qaatey.
- In la ilaaliyo maamuuska iyo wada shaqeynta isla markaana laga waantoobo in laysku weeraro qalabka warbaahinta.
- SSE waxay arrinkan u arkaan in wada tashi iyo go’aan dhexe oo keli ahi uu aasaas u noqon karo in la isku afgarto sugidda doorasho xalaal ah iyo xal u helidda wakhtiga xukuumadda ee xilku kaga eegyahay 6 Apriil 2009.
-In lagu qanco wixii ay dan u arkaan golayaasha qaranka, axsaabta, guddiga doorashooyinka iyo cidii kale ee arrinkan wax ka qabashadiisa loo igmado. Ilaahay ayaynu ka baryaynaa inuu xaqa iyo wanaaga ina garansiiyo Guddiga fulinta Cabbdi Cabdullahi Jibriil Guddoomiye
Fadxiya Sheekh Muse Guddoomiye Xigeen
Maxamed Bashe X. Xasan Lacaghaye
Cabdulkadir Maacalesh Xooghaye Guddiga Waddamada: 1. Maxamed Amiin Denmark
2. Jaamac Muuse Jaamac Italy
3. Zakariye Wacays Sweden
4. Eid Ahmed UK 5. Fathia Sh. Muuse Norway
6. Aden Mohamed Germany 7. Yassin Abdourahman France 8. Xasan M. Nur Finland 9. Ismaaciil Cawl Holland 10. Mohamed Hussein (Jacket) Belgium Alle ayaa mahad leh,